ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီ ... ရောင်စုံဂျင်းဘောင်းဘီ! | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီ…ရောင်စုံဂျင်းဘောင်းဘီ!
လူးကပ်စ garcia | | သဘောထားတွေ
Este ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျင်းဘောင်းဘီကငါတို့ဗီရိုကိုစပြီးဖြည့်တော့မယ်။ မီးခိုးရောင်၊ အပြာနှင့်အနက်ရောင်တို့၏အရိပ်များကိုချန်ထားပါ နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းနဲ့သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကွဲပြားတဲ့ထိပေးပါ ရောင်စုံဂျင်းဘောင်းဘီ.
သင့်ရဲ့ရောင်စုံဘောင်းဘီပေါင်းစပ် စစ်ရေးတန်ချိန်အတွက်အင်္ကျီနှင့်အတူ နှင့်ဂျာစီ, ရှပ်အင်္ကျီနှင့်တီရှပ်များအတွက်ကြားနေအရောင်။ ဘုရင့်အရောင်တစ်မျိုးသည်၎င်း၏အရိပ်အားလုံးတွင်အနီရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကိုဘလူးနှင့်အစိမ်းရောင်၊ အညိုရောင်ဘွတ်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဖိနပ်စသည့်မဲမှောင်သည့်အရောင်များဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကပြီးပြည့်စုံတယ်။
သင်ရွေးချယ်လျှင် ပြာသောသူတို့သည်လည်းရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာစင်ဖို့ပိုပြီးဂန္ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ဗြိတိန်စတိုင်ဘယ်မှာလဲ သိုးမွှေးနှင့်အ ၀ တ်အထည်များသည်သူတို့၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကနှင့်အတူကပေါင်းစပ် ဂန္မီးခိုးရောင် blazer နှင့်အညိုရောင်ဖိနပ်။ သင်၏နေ့စဉ်နေ့ရက်ကိုသင်ပြီးပြည့်စုံစွာကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာယခုသင်ယခုတင်ပြသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းပါ ပိုပြီးပေါ့ပေါ့စတိုင် အဲဒီမှာအညိုရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီကိုမီးခိုးရောင်သိုးမွှေးအကျီနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဂျင်နီကုတ်အင်္ကျီနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။
ဖိနပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဖိနပ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြိုက်နှစ်သက်ပါက, ဦး ထုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပခုံးအိတ်တစ်ခုယူလာရန်မမေ့ပါနှင့်။
အရဲရင့်ဆုံးအနေဖြင့်ဤလာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကိုသင်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်အရောင်အားလုံး၏နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သိသည်။ အရသာအတွက်အရောင်များ!
Haveclass တွင်: ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အစင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » သဘောထားတွေ » ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီ…ရောင်စုံဂျင်းဘောင်းဘီ!
Nestor Vanoni ဟုသူကပြောသည်
Nestor Vanoni အားပြန်ကြားပါ